Dawladda Soomaaliya oo siyaasad gelisay aaska muwaadinka u dhashay Somaliland oo Liibiya ku dhintay. |
Dawladda Soomaaliya oo siyaasad gelisay aaska muwaadinka u dhashay Somaliland oo Liibiya ku dhintay.
Hargeysa(GNN):-Marxuum Yuusuf Cabdisalaan Cali oo ahaa muwaaddin u dhashay dalka Jamhuuriyadda somaliland, kana mid ahaa tahriibayaasha muddo laba sano ku dhaw ku xidhnaa xabsi ku yaalla magaalada Tripoli ee dalka Libyaa ayaa maalintii sabtida ee 8-da bisha December u geeriyooday xanuuno ka soo gaadhay jidh dilkii iyo dhaawacyadii ka soo gaadhay jeelka uu mudada dheer ku jiray sida ay noo xaqiijisay Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland.
Waalidka dhalay marxuumka oo magaciisa la yidhaaho Cabdisalaan Cali Warsame oo deggan Hargeysa oo khadka telefoonka ugu warramay shabakadda Sagal News ayaa nooga warramay inay sugayeen oo dhalinyaro reer Somaliland ah iyo xubno kaleba ka shaqaynayeen sidii loo aasi lahaa, una soo dhamaytireen dhammaan waraaqihii sharci ee lagaga saari lahaa dhakhtarka laguna gayn lahaa xabaashiisa, haseyeehee, si aanay filayn lagu soo wargeliyay inay dawladda Libya codsatay inay waalidku u tagaan Muuqdisho Wasaaradeeda Arrimaha Debadda iyo Safaarada Libya ku leedahay Muuqdisho.
Agaasimaha Fulinta Hay’adda Qurbajoogga Somaliland Mudane Xasan Axmed Yuusuf ayaa isaguna noo xaqiijiyay jiritaanka warkaas, isla markaana sheegay in Safaarada Somalia ku leedahya Sudan iyo Muuqdishaba dhibaato weyn ku hayaan tahriibayaasha ay u aqoonsadaan inay ka soo jeedaan Somaliland xataa iyagoo badanakoodu sita baasaboorada dalkooda, isla markaana dhacdadan u dambaysay tahay cadaawad weyn oo ay u muujiyeen dadka reer Somaliland iyo dagaal marka uu Safiirka Somalia ee Libya leeyahay waalidka marxuumka dhalay waa inay tagaan Wasaaradooda Muuqdisho haddii kale Libya ma oggola.
“Runtii tahriibayaashu waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan mudada ay ku jiraan jidka iyo dalalka ay sii marayaan oo xadhig, iyo xanuuno iyo waxbadan ayaa ku dhaca, Libyana waa halka ugu daran xilligan. Haseyeeshee, waa wax lala yaabo inay Somalia dagaal la gasho maydka qof islaam ah oo siyaasad geliyaan sida hadda wararka aannu ku helayno ee waalidkii inanka iyo dhalinyaradii kale ee goobta joogayba nooga soo warramayaan. Waxa aannu hore wararka ugu helaynay inay safaaradaha Somalia ee Sudan iyo Libya ku milmeenmagafayaasha ka ganacsada tahriibinta dadka, iyo inay weliba mararka loo fidiyo gargaar dib usoo celineed kuwa ku xidhan jeelasha ay had safaaradahaasi uga faaiideeyaan muwaadiniintooda oo kaliya, qaar badan oo reer Somaliland ahna laaluush laga dalbado dadkooda. Waxa aannu sidoo kale waxbadan ka saaraynaa arrimahaas Hay’adaha Socdaalka iyo Gargaarka dadka tahriibayaasha ah ku shaqada leh oo laftooda aad mooddo inay qayb ka noqdeen fawdadaas. Dhacdadan u dambaysay ee Marxuum Yuusuf iyo Safiirka Muuqdisho ee Somalia waa fal dambiyeed laga galay islaamnimada iyo bini’aadanimadaba oo wax la cambaareeyo ah, oo si dhab ah loogula xisaabtamo,” ayuu yidhi.
“Bal maydka qof islaam ah oo in la aaso oo la xabaalo xaq u leh, oo waalidkiisi sidaas raalli ka yihiin weliba xabaalo qodkii u dirayaan, in sidaas foosha xun ee damiir la’aanta ah loola dhaqmaa miyaanay wax laga xishoodo ahayn? Haddii ay tahay kuwa u wakiilka ah Somalia iyo kuwa Libyan-ka ahba? Libya iyagaa sidaas wax u geliyay laakiin iyana waa dawlad qaran ah iyo dal madaxbannaane ma ahayn inay arrimahaas ah sidaas ugu fashilmaan. Ilaahay samir iiman ha ka siiyo waalidka iyo dhammaanteedba marxuumkaasna danbigiisa ha ka dhaafo. Waxa aan soo jeedinayaa in dhacdooyinkani casharo innoo noqdaan haddii ay tahay kuwa tahriibaya ee naftooda halista la gelinaya iyo kuwa danbiyada ka sii gelaya dadka tahriibaya ee kaxaynaya, ama waxyeellada kale u gaysanaya oo aan laga aamusin, laga hadhin ee lagula xisaabtamo,” ayuu ku daray hadalkiisa Agaasimaha Fulinta Wakaaladda Qurbajoogta Somaliland.
Arrintan ayaa ah mid sii horseedaysa cawaaqib xumo hor, leh waxaana mudooyinkii ugu danbeeyay laga dareemayay Somaliya heerka uu gaadhsiisan yahay cadaawada ay Somaliland u qaaday.